Ny fikarohana vaovao dia manasongadina ny fanohanan'ny vondrom-piarahamonina ho an'ny fiompiana akoho - Blue Ventures
Aprily 5, 2022
Fikarohana vaovao manasongadina ny fanekena eo an-toerana ny tombotsoa ara-toekarena sy ara-tsosialy amin'ny fiompiana akoho amam-borona (CBA) maharitra any atsimon'i Madagasikara.
Ny fanadihadiana, nataon'ny mpikaroka avy ao amin'ny Oniversiten'i Edinburgh sy Blue Ventures, dia naneho fa ny fambolena ahi-dratsy sy kôkômbra an-dranomasina dia nanome fahafahana azo vinaniana kokoa sy azo antoka kokoa ho an'ny vondrom-piarahamonina ambany, raha oharina amin'ny jono.
Nampiasa Photovoice − fomba fandraisan'anjara mifototra amin'ny sary ny mpikaroka − hikarohana ny fomba fijery eo an-toerana momba ny tombontsoa azo avy amin'ny fiompiana trondro ao anatin'ny faritry ny ranomasina Velondriake (LMMA). Nanome fakan-tsary nomerika ho an'ny olona 18 ny tetikasa, anisan'izany ny mpamboly ahidrano sy kôkômbra, mba hanoratana ireo olana lehibe miantraika amin'ny fiarahamonina misy azy ireo. Naka sary maherin'ny 300 ny mpikambana ao amin'ny vondrom-piarahamonina, izay nifantoka tamin'ny fifanakalozan-kevitra lalina mikasika ny fiantraikan'ireo hetsika fiompiana trondro ireo eo amin'ny fiainany. Vokatra, navoaka tao amin'ny gazety Fitantanana ny ranomasina sy ny morontsiraka Nasehon'ireo mpandray anjara fa niaiky ny mpandray anjara fa ny fiompiana akoho amam-borona mifototra amin'ny fiaraha-monina dia nanome fahafahana azo antoka kokoa sy azo antoka kokoa raha oharina amin'ny jono.
"Betsaka ny olona liana amin'ny maha-mpamboly satria fantany fa [hahazo] tombony betsaka amin'ity asa ity izy ireo," hoy ny mpikaroka iray.
Tsy toy ny karazam-pambolena mahazatra izay mazàna midadasika, ary matetika tsy maharitra, ny fiompiana ahidrano sy kôkômbra avy amin'ny fiaraha-monina dia tsy mitaky famatsiana sakafo, ary tsy misy fiantraikany ratsy amin'ny tontolo iainana manodidina. Amin'ny fiasana amin'ny maha-mpiompy fiompiana akoho, ny vondrom-piarahamonina dia afaka mampihena ny fiankinan-dohany amin'ny jono sady mahazo fidiram-bola maharitra sy azo antoka kokoa.
Tao amin’ny tanàna kely mpanjono ao Tampolove, izay misy mponina latsaky ny 500 no nanaovana ny fikarohana. Iray amin'ireo tanàna 33 ao anatin'ny Velondriake LMMA mirefy 600km² izy io − iray amin'ireo hetsika fikajiana ny fiaraha-monina maherin'ny 170 manodidina ny morontsirak'i Madagasikara. Mpanjono madinika no tena miaina ao anatin’ny fahantrana lalina ny mponina any amin’ity faritra maina ity. Miantehitra amin’ny jono izy ireo amin’ny sakafony andavanandro, ny fivelomany, ary koa ny maha-kolontsaina azy, izay tandindomin-doza ankehitriny noho ny fihenan’ny hazandrano.
Ny vondrom-piarahamonina eo an-toerana, miaraka amin'ny fanohanan'ny Blue Ventures, Ocean Farmers, ary Indian Ocean Trepang, nanangana hetsika momba ny fiompiana trondro ao anatin'ny faritra fikajiana ny vondrom-piarahamonina mba hampiovaova ny fidiram-bola sy hampihenana ny faneren'ny jono.. Nohamafisin’ireo mpandray anjara fa mahazo fidiram-bola fanampiny ireo mpamboly fiompiana izay mampitombo ny faharetany amin’ny alalan’ny fahafahany mividy entana, mitahiry ary mampiasa vola. Nomarihin’ny mpiara-monina ihany koa fa hatramin’ny naha mpamboly fiompiana dia tsy dia nanjono loatra izy ireo ary tsy dia niharan-doza loatra tamin’ny andro ratsy. Ireo hevi-baovao ireo dia manantitrantitra ny andraikitra lehibe azon'ny fiompiana trondro miaraka amin'ny fiarovana an-dranomasina mifototra amin'ny fiaraha-monina, manome fivelomana azo antoka sy azo antoka kokoa ho an'ny vondrom-piarahamonina amorontsiraka.
"Matetika loatra ny fikarohana akademika dia atao 'amin'ny' vondrom-piarahamonina, fa tsy 'miaraka' amin'izy ireo," hoy i Lara Funk, mpitarika mpikaroka. "Ny fampiasana fomba fandraisana anjara toy ny Photovoice dia nanampy tamin'ny fanovana io fihetsehana io tamin'ny famoronana sehatra ho an'ny mpikambana ao amin'ny vondrom-piarahamonina mba hizarana ny fomba fijeriny. Ity fomba fandraisana anjara ity dia mifanaraka amin'ny maodely mifototra amin'ny vondrom-piarahamonina Blue Ventures izay miaro sy manohana ireo vondrom-piarahamonina eo an-toerana.
Photo: Ireo mpamboly ahi-maitso any Tampolove, Madagasikara, dia mitondra ny vokatra eny amoron-dranomasina. Fanomezana sary: ​​Mpandray anjara amin'ny Photovoice.
Vakio ny lahatsoratra feno: Ny fiheverana ny fidirana sy ny tombontsoa azo avy amin'ny fiompiana akoho eny anivon'ny fiarahamonina amin'ny alalan'ny Photovoice: Fandinihana tranga iray ao anatin'ny faritra an-dranomasina tantanin'ny faritra eto Madagasikara.
Fantaro bebe kokoa momba ny asan'ny Blue Ventures momba ny fikarohana ny fiompiana ho solon’ny jono.
Vakio ny bokin'ny Blue Ventures momba ny fiompiana fiompiana ifotony.
Ity asa ity dia namatsy vola sy notohanan'ny University of Edinburgh, Blue Ventures, ary ny Prince Albert II ao amin'ny Fondation Monaco.
Ny mpanoratra mifanaraka amin'izany, Lara Funk, dia azo tratrarina amin'ny [email voaaro] ao amin'ny Oniversite Heriot-Watt.
fivelomana hafa, aquaculture, fiaraha-monina, fiompiana trondro tarihin'ny fiaraha-monina